अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस- आफन्तले रुँदै दुःखेसो पोखे, कहिले भेटीने हाम्रा आफन्त ? – Etajakhabar
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस- आफन्तले रुँदै दुःखेसो पोखे, कहिले भेटीने हाम्रा आफन्त ?
शरद शर्मा/ काठमाडौँ, १४ भदौ । ओखलढुङ्गा ज्यामिरेकी केशवकुमारी वाग्लेको १७ वर्षअगाडि बेपत्ता भएको छोरा गोपीकृष्ण वाग्ले अझै अत्तोपत्तो छैन ।
यस्तै एक हजार ३३८ उजुरी छानबिन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र १४, २०७४ समय: १६:२१:०२